မြန်မာ – တရုတ် လက်မှတ်ရေးထိုးသော အချက် (၃၃) ချက်အပေါ် သုံးသပ်တင်ပြချက် (၂) – Nyang Media
By : ဒေါက်တာ Mကောန်လ
တိုင်းပြည်ဟာ အမှားမခံတော့ပါ။MOA သဘောတူညီချက်တွေကတော့ ထားလိုက်တော့၊ ဥပဒေအရ စည်းနှောင်မှုမရှိသေးပဲ ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်တဲ့ …
ဒီအပိုင်းမှာတော့ သဘောတူညီချက်များ (MOA) အပိုင်းကို ဆက်လက်သုံးသပ်မှုလုပ်ပါမယ်။ ကျနော်တင်ပြဆဲမှာပဲတစ်ချို့သော Lobby များရဲ့ အလွဲသတင်း ရေးသားမှုတွေ၊တစ်ချို့သော သတင်းဌာနများရဲ့ဘက်လိုက်ရေးသားမှုတွေတစ်ချို့သေသူများရဲ့ မပြည့်စုံသောတင်ပြမှုတွေနဲ့ ပြည်သူ အများစုကြီး နားလည်မှုလွဲသွားမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။
MOU (၁၄) ချက်နဲ့ စာလွှာ (၁၀) ချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာသော မူကြမ်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလောက်များပြားပြီး မြန်မာတစ်ပြည်လုံးအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးချက်တွေဟာ နောင်မြန်မာ့အနာဂတ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ကို ရောက်ရှိလာနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းဖော်ပြတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကို လူထုသိရှိပြီး မှန်းဆနိုင်မှ အစိုးရ – ပြည်သူ လက်တွဲညီသော ရှေ့ရှုချက် များ ရလာနိုင်ပါမယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် ရရန်ခက်လှတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်သုံးသပ်ကြည့်ဦးစို့ . . .
၃။ MOA (သဘောတူညီချက်များ)
“ ဥပဒေအရ စည်းနှောင်မှုရှိပြီး မဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖေါ်ရတဲ့ သဘောတူစာချုပ်များ”
မြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားမှာ သဘောတူညီချက် (၉) ခု ရှိတယ်
အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲ . . .
နှစ်နိုင်ငံ သံရုံးများ မြေ / အဆောက်အအုံ အပြန်အလှန် ထောက်ပံ့ရေး
ကျောက်ဖြူ SEZ အကောင်အထည်ဖေါ်မှုနှင့် အစုရှယ် ယာများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်
မန္တလေး အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း
မြန်မာမှ တရုတ်သို့ပို့မယ့် ကျွဲနွားများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်ရန်
မြန်မာမှ အပူပေးစနစ်ဖြင့်လုပ်ထားသော ပိုးအိမ်ခြောက် များ တင်ပို့ခြင်း
မြန်မာ့ဆန် တရုတ်သို့တင်ပို့ရန် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပိုးမွှားကင်းစင်ရေးဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်
တရုတ်အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားနှင့် မြန်မာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ ပါဝင်တယ်။
ဒီ (၉) ချက်ကိုကြည့်ရင် မြန်မာဘက်ကရတာ
ကျွဲနွား တင်ပို့ရာမှာ ထိန်းသိမ်းဖို့
မန္တလေး အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးကိစ္စ တို့ဖြစ်ပြီး
မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက်ကို တရုတ်သို့ တရားဝင်ပို့နိုင်ရန် လမ်းကြောင်းဖွင့်နိုင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်တယ်။
ကျောက်ဖြူ SEZ နဲ့ အစုရှယ်ယာကိစ္စတွေ အပြီးသတ်ရသွားခြင်း
တရုတ် အမျိုးသား TV Channel တွေ မြန်မာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Media Propaganda လုပ်ဖို့ လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတာတွေ
OBOR CMEC အတွက် လူစီးရထားအမြောက်အများ မြန်မာကို ရောင်းလိုက်နိုင်ခြင်း
ရှမ်းမြောက် Border Trade ချင်းရွှေဟော်အတွက် မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ကွမ်းလုံတံတားကို တည်ဆောက်ပြီး CMEC Sub Contract တစ်ခုကို လမ်းကြောင်းဖွင့်နိုင်ခြင်း စတဲ့ အရေးပါလှတဲ့ ကိစ္စ (၄) ခု သဘောတူညီချက်ရအောင် ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဓါတ်အားလိုင်းများ စီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုပါ။ ဒါဟာ ကချင်တွေ၊ ရှမ်းတွေ စတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ စိုးရိမ်နေတဲ့ မြစ်ဆုံမြစ်ဝှမ်းနဲ့ သံလွင်ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေအတွက် အကြိုလမ်းကြောင်း ဖြစ်နေတာပါပဲ …
အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင် Xi Jinping ဟာ သူ့နိုင်ငံနဲ့ သူ့နိုင်ငံရေးအနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ OBOR ကမ္ဘာပတ်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကြီးကို အမေရိကန်တို့ရဲ့ Trade War ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ Russia Gazprom Sanction လုပ်ခဲ့တဲ့အချက် တစ်နွယ်ငင်တစ်စင်ပါ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း အခက်ကြုံနေတာကို ကုန်းလမ်း OBOR နဲ့ ပြန်အသက်ဆက်နိုင်အောင် Asean Link ကြီးကိုဆက်သွယ်ဖို့ မြန်မာက CMEC ကိုအရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်။
MOU အောက် မှာ မြစ်ကြီးနား၊ နန်ကျင်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ ချင်းရွှေဟော်၊ မြင်းခြံ၊ ဆီမီးခုံ၊ မန္တလေး ရှမ်းလေးကျွန်း၊ ရန်ကုန်မြို့သစ်၊ စီးပွားရေးဇုံကြီးတွေ အပြိုင်းအရိုင်းလုပ်ဖို့ လမ်းကြောင်းဖွင့်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ် …
နောက်တစ်ချက်က ရေလမ်း OBOR အတွက် နောက်ဆုံးဂယ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းနဲ့ စီးပွားရေးဇုန်ကြီးရဖို့လည်း အသည်းအသန် အရေးကြီးနေခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ Xi ရဲ့ရည်မှန်းချက် ပေါက်မြောက်သွားပြီလို့ပြောရပါမယ်။
ကျောက်ဖြူ SEZ အတွက်သဘောတူညီချက်နဲ့ CMEC စီမံကိန်းတွေအတွက် MOU တွေကို အားလုံးနီးပါး ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ပြီလို့ပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အရေးပါတဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးများကို ဂျပန်ထက်ဦးပြီး ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့သလို အောင်မြင်စပြုလာတဲ့ ရန်ကုန်နားက ဂျပန်သီလဝါ SEZ နဲ့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့သစ်နဲ့ ရန်ကုန်အနောက်ဘက် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းသစ်တို့အတွက်ပါ အပြီးသတ်ပြင်ဆင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
အဆစ်ပါသွားတာက အရေးပါလှတဲ့ မီဒီယာကဏ္ဍမှာပါ မြန်မာပြန်ကြားရေးနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် လုပ်သွားတာပါပဲ။
လူထုကို သတိပေးလိုတာက နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေအတွက် (ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ မူဆယ်၊ ချင်းရွှေဟော်) မူဆယ်ကို အဓိကဇုံအဖြစ် အသေအချာသတ်မှတ်ခြင်းကို ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး MOU နဲ့ လမ်းကြောင်းဖွင့်ထားသလို ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ရင်းနှီးမြုုပ်နံှရေး MOU အောက် မှာ မြစ်ကြီးနား၊ နန်ကျင်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ ချင်းရွှေဟော်၊ မြင်းခြံ၊ ဆီမီးခုံ၊ မန္တလေး ရှမ်းလေးကျွန်း၊ ရန်ကုန်မြို့သစ်၊ စီးပွားရေးဇုံကြီးတွေ အပြိုင်းအရိုင်းလုပ်ဖို့ လမ်းကြောင်းဖွင့်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်အထူးသတိပြုရမယ့် MOU ကတော့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဓါတ်အားလိုင်းများ စီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုပါ။ ဒါဟာ ကချင်တွေ၊ ရှမ်းတွေ စတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ စိုးရိမ်နေတဲ့ မြစ်ဆုံမြစ်ဝှမ်းနဲ့ သံလွင်ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေအတွက် အကြိုလမ်းကြောင်း ဖြစ်နေတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီလောက်များပြားတဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လိုတယ်။
ဒီလိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဆိုတာ အနည်းဆုံး လနဲ့ချီ ကြာပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဆောက်လုပ်ရေး လျှပ်စစ်နဲ့စွမ်းအင် စီးပွားကူးသန်း စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေး လယ်ယာစိုက်မျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေး မြန်မာ့ရင်းနှီးမြုုပ်နံှမှုကော်မရှင် (MIC) ရှေ့နေချုပ်ရုံး NLD စီးပွားရေး တာဝန်ခံအဖွဲ့ အစရှိတဲ့ ဌာနပေါင်းစုံ ပညာရှင်ပေါင်းစုံတို့ ပါပါတယ်။
အဓိကက နိုင်ငံရေးကိုဦဆာင်နေတဲ့ NLD ပါတီ CEC များရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ဟာ အမှားမခံတော့ပါ။ MOA သဘောတူညီချက်တွေကတော့ ထားလိုက်တော့၊ ဥပဒေအရ စည်းနှောင်မှုမရှိသေးပဲ ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်တဲ့ MOU (၁၄) ချက်နဲ့ စာလွှာ (၁၀) ချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာသော မူကြမ်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ရေရှည်အကျိုးကို ကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အကြံပြုချက်နဲ့ သုံးသပ်ချက်များကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဒေါက်တာ Mကောန်လသည် ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သည်။
မြန်မာ – တရုတ် လက်မှတ်ရေးထိုးသော အချက် (၃၃) ချက်အပေါ် သုံးသပ်တင်ပြချက် (၁)
Tags: MOU, စီမံကိန်း, တရုတ်, ပြည်သူ, အစိုးရ